I-WordPress: Faka iJetpack kwaye uvumele iiHovercards | Martech Zone
WordPress: Faka jetpack kwaye Nika amandla iiHovercards
NgoLwesibini, Agasti 30, 2011 NgoLwesithathu, Oktobha 26, 2011 Douglas Karr
Izinto zokuqala kuqala… unayo iakhawunti Gravatar.com? Yiya kuseta enye ngoku kwaye wenze ukuba iprofayile yakho yoluntu. Yongeza iinethiwekhi zakho zentlalo, inkcazo kunye nemifanekiso embalwa. Ngoba?
Ii-Gravatar zisetyenziselwa ukubonisa ifoto yakho apho ubhalise khona okanye ushiye uluvo kunye nedilesi ye-imeyile. Sukuba nexhala- ababi okanye babonise idilesi ye-imeyile, benza isitshixo se-hash… kwaye eso sitshixo se-hash ligama lefayile kwifoto yakho. Yinkqubo entle ekhuselekileyo. Iigravatars bezikhe zajikeleza ixesha elininzi- kodwa ngoku ungaseta iprofayile epheleleyo yoluntu kwi-Gravatar.com. Kwaye, ukusukela ekwenzeni i-Gravatar iprofayile yoluntu, abantu ababukhali Automattic (abenzi beWordPress) bebexakekile.
Usenokuba uqaphele kwipaneli yakho yolawulo ye-WordPress onokuyenza ngoku jetpack kwiWordPress. Kuluhlu lwezongezo ezinkulu zeWordPress ezenzelwe ukusetyenziswa okuphezulu kunye nokusingathwa kwilifu. Enye yezinto ezinje ngulo Hovercard. Ukuba isiza senza iiHovercards (awunyanzelekanga ukuba ube yindawo yeWordPress), ungayenza imouse ngaphezulu kwayo nayiphi na i-gravatar kwaye iya kubonisa iprofayile yakho. Iyaqala ukusebenza kumnandi ngomxholo wethu:
IiHovercards bezikho ukusukela ngo-Okthobha odlulileyo, kodwa ziyathandwa ngoku jetpack uyabamba. Mane nje ubambe mouseover umfanekiso, kwaye uya kufumana ngokuzenzekelayo iprofayile yalowo msebenzisi! Mnandi! Ukuba awunayo indawo yeWordPress, usengasebenzisa iGravatars (umsebenzi olula we-PHP) kunye neeHovercards (jQuery kunye nesikripthi seHovercard).
I-TweetTwo: Umyalezo oLungileyo, ixesha elifanelekileyo, indawo elungileyo
Ukuphuhlisa uPhononongo ngumfanekiso oqingqiweyo, hayi ukuphosa
Agasti 30, 2011 ngo-6: 39 PM
Umzekelo omkhulu womfanekiso!
Agasti 30, 2011 ngo-6: 40 PM
Hmm, ngokuhlekisayo, nguDoug, umfanekiso wakho ubonakalisa umda ngokungathi uza kuthi gqi kodwa ungaze ubonise iinkcukacha kwaye ubonise i-spinner ngokungapheliyo. Xa ndicofa kuyo, uGravatar uthi umsebenzisi akafumaneki. Ezinye iiblogger kwindawo yakho ziyasebenza, nangona kunjalo ndicinga ukuba kukho into engalunganga ngeGravatar yakho.
Agasti 31, 2011 kwi-12: 56 AM
Kutheni undibiza kanjalo Tolga? Ndiyazi-ndicinga ukuba inento yokwenza nam ukuba ngumlawuli kuba yenza njalo nakwabanye abalawuli. Ndiyasebenza kuyo… bekungafanelekanga ukuba uqaphele!
Sep 1, 2011 kwi-4: 44 AM
Ulungiso lweTolga! Ndifumanise ukuba andikhange ndiyongeze idilesi ye-imeyile ebendiyisebenzisa kwiBhlog yeTekhnoloji yeNtengiso kwiGravatar. Yhu!